Fomu kuPDP Solution uchishandisa Formstack uye Webmerge
Chitatu, Ndira 23, 2013 Chishanu, February 27, 2015 Douglas Karr
Ini ndanga ndichishanyira nemumwe weavo tekinoroji vanotsigira '(Formstack) vatengi nezuro kuti vakurukure nezve kusarudzika kusanzwisisika kwavange vachishandira. Izvo zvakandifadza ndezvekuti ivo vaive vaine yakawanda yekubatanidzwa yakapedzwa kunyangwe ivo vaishaya chero budiriro zviwanikwa pane vashandi vavo.
Chikamu chakakura chebasa ravo chaive nemafomu akapedzwa nevashandi vekutengesa, tarisiro kana vatengi. Mhedzisiro yacho yaive yakatarwa maPDF aifanirwa kuzadzwa nemazvo uye achiunzwa zvemagetsi kumakambani evavo. Ivo vakapedza izvi nesimba vachishandisa Formstack uye WebMerge. PakatiFormstack 's yakapusa mushandisi interface yekugadzira iyo bvunzo ... uye kugona kweWebMerge kudhiza iyo data uye kuburitsa iyo PDF… iyo sisitimu yakashanda zvisina mutsindo.
neFormstack WebMerge yekubatanidza iwe unogona kugadzira zvinyorwa zvePDF kubva kune mafomu kutumira, kutumira zvigadziriswe email zviziviso, uye otomatiki email magwaro akapedzwa ePDF. Uku kubatana kwakasimba kunogona kubvumidza bhizinesi kugadzira matikiti echiitiko, zvibvumirano, zvibvumirano zvebasa… unozvipa zita!
Shandura gwaro rako rekugadzira zvinyorwa zvoga kugadzira zvinyorwa zvePDF kubva kune ako mafomu kutumira. Kugadzirisa kunokurumidza uye nyore.
Tags: fomu kuendesafomu ku pdfnezvimiroformstackTechwebmerge
Jan 24, 2013 pa 5: 18 AM
Sisitimu yakaita seiyi inonyatsoshanda "zvisina kana mutsindo" chaizvo sezvawanyora?
Jan 24, 2013 pa 9: 06 AM
Hongu, ndinomira nekushandisa kwangu kweshoko. 🙂